Miparitaka Any Atsimon’i Venezoela Ireo Kilasy Fianarana Tsy Misy Mpampianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2016 3:30 GMT
Nalefa voalohany tao amin'ny bilaogin'i Morelia Morillo ito lahatsoratra ito, Ny Tantaran'ny Sisintany [Es.].
Na tian'izy ireo aza ny asany, niala ny toeram-mpampianarany ireo mpampianatra maherin'ny 300 isa tany Gran Sabana, Venezoela, mba hitady fidiram-bola bebe kokoa any amin'ireo indostria hafa. Mandeha miala an'ireo sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa amin'ny ambaratonga fototra ireo mpampianatra — indrindra ireo avy any amin'ny olona tena teratany — mba hitady asa any amin'ireo fitrandrahana volamena sy diamondra, raha toa ireo sasany (indrindra ireo Kreôla, na ireo tsy teratany) mitady asa toy ny mpitondra fiarakaretsaka na mivarotra ny vokatra Tupperware (boaty plastika), hot dogs (mofo voasesika sosisy) sy empanadas (mofo voasesika hena), na lasantsy.
Mampiasa taham-panakalozana efatra samihafa amin'ny fotoana iray i Venezoela. Ny vokany, na tena mora be ireo zavatra, na tena lafo be tsy takatra mihitsy, miankina amin'ny taha ampiasaina. Araka ny Ivontoerana Mises, tsy maintsy hiankina amin'ny varomaizina ao aminy ireo Venezoelana mba hahatratrarany ny tinadiny amin'ny vola ivelany. Noho izany, miankina ho azy amin'ny tahan'ny varomaizina ny olona, na somary tsy dia ahazoana tombony aza io (mahatratra 900 bolivars ny iray dolara, raha toa ka 6,3-200 bolivars ny iray dolara amin'ny tsena “ofisialy”).
Tanindrazan'ny foko teratany Pemón ny Gran Sabana. Faritra itoeran'ireo karazana Fiarovana ny tontolo iainana io: Valan-javaboaharim-pirenena Canaima, ny Tsangambato Natoralin'ny Tepuyes, Faritra Atsimo Arovana ao Bolivar, ary ny Tahirin-dRano ao Ikabarú.
Amin'ireo tranga sasany, mbola misy ireo toerana tsy misy mpiasa. Nolazain'i Valdirene Dos Santos tao amin'ny bilaogin'ny Mujeres del Agua Foundation hoe ao amin'ny vondrom-piarahamonina El Paují, atambatra ho anaty kilasy iray ireo mpianatra avy amin'ireo ambaratonga samihafa.